Toban qof oo ku geeriyootay gaari la jiirsiiyay wadanka Canada – Radio Daljir
Abriil 24, 2018 10:10 b 0
Booliska Canada ayaa su’aalo waydiinaya nin lagu tuhmayo inuu gaari jiirsiiyay toban qof waddo mashquulkeedu badanyahay oo waqooyiga magaalada Toronto ka mid ah, halkaasi oo 15-qof uu ku dilay , halka 15na ay dhaawacyihiin.
Ninka weerarka gaystay ayaa boolisku ku sheegay inuu yahay Alek Minassian oo 25-sano jir ah, waxaana boolisku sheegay weerarka inuu ahaa mid ula kac ah, balse aan la hayn sababta ka dambaysay.
Raysal wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku tilmaamay inuu ahaa weerar musiibo ah oo macno la’aan ah, waxaana uu sheegay inay ku keentay tiiraanyo wayn.
Dhanka kalle sarkaal booliska katirsan ayaa lagu bogaadiyay inuu soo qabtay ninka weerarka gaystay, isagoo ku qaylinaya idila madaxa iga toogta, waxaana sarkaalka soo qabtay ninka weerarka gaystay la sheegay inuu wax rasaas ah furin uuna ku guulaystay inuu soo qabto.
Telfishinka CBC ayaa muujiyay nin u muuqday inuu qori watay oo ku qaylinaya idila, iyo booliska oo leh, waxba nagama gelin ee dhig hubka. iyadoona iminka baaritaano lagu hayo ninka weerarka gaystay.